मौसम कहाँ कस्तो ? - Everest Dainik - News from Nepal
मौसम कहाँ कस्तो ?
काठमाडौं, असार ११ । देशका अधिकांश क्षेत्रको मौसम बुधबार सामान्यतया बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले मञ्जु बासीले बताएकी छन् ।